Ogaden News Agency (ONA) – Diyaaradaha Ruushka oo Duqeeyay Goobaha Ay Mucaaridka Suuriya Haystaan.
Diyaaradaha Ruushka oo Duqeeyay Goobaha Ay Mucaaridka Suuriya Haystaan.
Posted by ONA Admin	/ November 28, 2017
Ciidanka Cirka ee Ruushka ayaa dar dar galiyey duqaynta ay ku hayaan dhulka ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaradka dalka Suuriya maalin kahor furitaanka wareega 8aad ee shirka nabadeynta dalka Suuriya.
Ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhimatay duqeyn ka dhacday Gobalka bari ee Dayr Al-Zuur, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah qeybo kamid ah dhulka ay ku sugan yihiin xoogaga Daacish ee la duqeeyey. Duqeynta ayaa sidoo kale ka dhacday duleedka Caasimada Dimishiq iyo deegaanka Guta oo ay wali ku sugan yihiin xoogaga mucaaridka la dagaalamaya xukuumada Bashaar Al-Assad.
Shirka wadahadalka Suuriya oo maanta ka furmi doona magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa waxaa hogaaminaya Qaramada Midoobay (QM), waana kii 8aad oo ay ku kulmayaan wufuud ka kala socda Xukuumada iyo mucaaridka, iyadoo kulamadii hore wax natiijo ah laga gaadhin.
Siyaasiyiinta matala xoogaga Mucaaridka oo todobaadkii hore ku kulmay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in aysan wax shuruud ah ku xidhaynin furitaanka shirka sidii dhacday mararkii hore, balse waxay sheegeen in furaha kaliya ee heshiiska uu yahay inuu xilka isaga dego Bashaar Al Assad.